Monday February 13, 2017 - 18:13:05 in Wararka by Super Admin
Isbahaysiga caalamiga ah ee duullaanka ku qaaday wadanka Afghanistan ayaa tobaneeyo qof rayid ah ku xasuuqay Koonfurta wadankaasi sida ay xaqiijiyeen hay’adaha sheegta in ay u doodaan xuquuqul insaanka.
Wararka ka imaanaya gobolka Helmand ee Koonfurta Afghanistan dhaca ayaa sheegaya in dad shacab ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen duqeymo aan loo meel dayin oo ay fuliyeen ciidamada isbahaysiga NATO.
Warbixin kasoo baxday waxa loogu yeero Q.Midoobe ayaa lagu sheegay in ciidamada NATO ay 18 qof shacab ah oo u badan haween iyo carruur ku dileen magaalada Sinjiin ee gobolka Helmend.
Q.Midoobe waxay sheegtay in 18 qof shacab ah ku dhinteen duqeymo xagga cirka ah oo diyaaradaha isbahaysiga ka fuliyeen mandiqadda Sinjiin maalmihii khamiista iyo jimcaha.
Mas’uuliyiin katirsan melleteriga xukuumadda dabadhilifka Afghanistan ayaa sheegay in duqeymaha xasuuqa geystay ay fuliyeen diyaarado dagaal oo ay leedahay dowladda Mareykanka.
Bayaan kasoo baxay ‘Q.Midoobe’ ayaa loogu baaqay in dhinacyada ku lugta leh dagaalka Afghanistan ay ka fogaadaan wax walba oo dhibaata u geysanaya dadka rayidka ah, warkan kasoo baxay Q.Midoobe ayaa imaanaya xilli cadawgu uu sare uqaaday xasuuqa ka dhanka ah dadka muslimiinta Afghanistan.
Dhinaca kale saraakiisha ciidanka Mareykanka ee wadanka Afghanistan ayaa sheegay in isbuucii lasoo dhaafay ay gobolka Helmand ka fuliyeen in kabadan 30 duqeyn oo ay labeegsadeen goobo ay tuhunsanyihiin in ay ku suganyihiin ciidamo katirsan imaarada Islaamiga Afghanistan balse waxay sheegeen in ay baarayaan haddii duqeymahaasi khasaara shacab geysteen iyo inkale.
Nin lagu magacaabo Jabbaar Kahramaan oo madaxtooyada Afghanistan uqaabilsan ammaanka gobolka Helmand ayaa xaqiijiyay in duqeymo ay geysteen diyaaradaha dagaalka isbahaysiga caalamiga ah ay ku dhinteen 22 qof rayid ah oo 13 kamid ah ay isku qoys yihiin.
Isbahaysiga NATO ayaa boqolaal Askari u diray Koonfurta Afghanistan si ay dagaalyahanka Talibaan uga waabiyaan dhowr magaalo oo ay ku sigteen in ay gacanta ku dhigaan sida magaalada caasimadda u ah gobolka Helmand.
Mas’uuliyiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa dhowr mar sheegay in ciidamada Mareykanka ay xasuuq daran ku hayaan shacabka rayidka ah iyagoona camaliyaad ka dhacay magaalada Kabuul ugu aarguday shacabka la xasuuqay.